Kwichina Abathengisi abaphezulu base China i-PVC Nasal Airway / Nasopharyngeal Airway mveliso kunye nabathengisi Biotek
Ikhowudi yemveliso: BOT 128000
Intshayelelo: I-Nasopharyngeal Airway yityhubhu eyilelwe ukubonelela ngendawo yomoya ukusuka empumlweni ukuya kwi-pharynx yangasemva. I-Nasopharyngeal Airway inokudala umendo welungelo elilodwa lomenzi kunye nokunceda ukunqanda ukuphazamiseka komoya ngenxa yezicubu zehypertrophic. I-Nasopharyngeal Airway yenza i-patent yomoya kuwo wonke umgama webhubhu. I-Nasopharyngeal Airway inokuphazanyiswa ukuba indlela yeempumlo imxinwa kwaye iyangqengqa idayamitha yangaphakathi yeNasopharyngeal Airway kwaye inokubanjiswa kwisiphelo esisekude. Patency yeyona njongo iphambili yeNasopharyngeal Airway. Ioksijini inokuphuculwa ngokusebenzisa iphuphu lempumlo ngaphezulu kweNasopharyngeal Airway. Ioksijini inako ukuhanjiswa ngokuqhutywa kwempumlo yempumlo ngaphakathi kwiNasopharyngeal Airway
Isicelo: esetyenziselwa ukuququzelela ukutsala ngexesha lokunyamekela, i-anesthesia jikelele, kunye nokubonelela ngenye indlela yomoya ngexesha loxinzelelo.
Ubukhulu: 3mm ukuya 9mm ekhoyo;
1.Made izinto grade grade zonyango, kunye latex free;
Ukuvumela umphezulu weemvume zokufaka ngokulula;
3. Ingcebiso erandiweyo yokuthuthuzela isigulana;
4. Ifanelekile kwizigulana ezineminyaka eyahlukeneyo.
I-Nasopharyngeal airway yenzelwe ukufakwa ngokulula kunye nokuthuthuzelwa kwesigulana. Iququzelela ukutsalwa kukhathalelo olunzulu, i-anesthesia ngokubanzi kwaye ikwabonelela ngenye indlela yomoya ngexesha lenkqubo engxamisekileyo.
1. I-Nasopharyngeal airway yenziwe nge-PVC yonyango.
2. Iyafumaneka nge-DEHP SIMAHLA.
3. Ukulawulwa kweempumlo.
4.Ingabakho ngombala weendlovu omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka okanye umbala ohlaza ocacileyo.
5. Ixilongo elikhulu liyafumaneka.
6. Iyafumaneka nge-CE, iziqinisekiso ze-ISO.
Egqithileyo I-Laryngeal Mask Airway (abicah)
Okulandelayo: Banokulahlwa lobushushu Probe kunye Banokubulawa SPO2 woluvo